Ngwunye aluminom brazing na-abụwanye ihe na ụlọ ọrụ. Otu ihe atụ bụ brazing ọkpọkọ dị iche iche na ahụ ọkụ na-agbanwe ọkụ. Na induction kpo oku a na-ejikarị ụdị usoro a abụghị nke a na-agbanye gburugburu, nke nwere ike ịkọwa dị ka ụdị "Horseshoe-hairpin". Maka ihe ndị a, oghere magnet na nkesa dị ugbu a bụ nke 3-D na okike. Na ngwa ndị a, enwere nsogbu na ogo nkwonkwo na nkwekọ nke nsonaazụ site n'akụkụ ruo akụkụ. Iji dozie otu nsogbu dị otú ahụ maka nnukwu onye nrụpụta ụgbọ ala, ejiri usoro mmemme kọmputa Flux3D mee ihe maka usoro ọmụmụ na njikarịcha. Ihe njikarịcha gụnyere ịgbanwe mgbanwe ntinye na nhazi njikwa magnetik. Ihe ntinye ohuru ohuru, nke emeputara nke oma na ulo nyocha, meputara akuku nwere nkwonkwo di elu karie otutu ebe mmeputa.
Cargbọ ala ọ bụla chọrọ ọtụtụ ndị na-agbanwe ọkụ dị iche iche (ọkụ ọkụ ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ, ndị na-ekpo ọkụ, wdg.) Maka ike ikuku, ikuku oyi, mmanụ mmanụ, wdg. Ọbụlagodi na ejiri otu injin ahụ maka ọtụtụ ụdị ụgbọ ala, njikọ nwere ike ịdị iche site na nhazi dị iche iche n'okpuru mkpuchi. N'ihi nke a, ọ bụ ụkpụrụ omume maka ndị nrụpụta akụkụ iji mee ọtụtụ ozu ndị na-agbanwe ọkụ wee tinyezie njikọ dị iche na ọrụ nke abụọ.
Ozu ihe na-ekpo ọkụ na-ejikarị ntanye aluminom, ọkpọkọ na isi ihe ejiri ya na ọkụ. Mgbe ha kwusịrị nkwado, a na-ahazi ndị na-ekpo ọkụ ọkụ maka ụdị ụgbọ ala e nyere site na ịtinye ma ọ bụ tankị naịlọn ma ọ bụ ọtụtụ ụdị ọkpọkọ aluminom dị iche iche na njikọta njikọ. A na-ejikọta paịpụ ndị a ma ọ bụrụ na ịgbado ọkụ MIG, ire ọkụ ma ọ bụ brazing induction. N'ihe banyere brazing, achọrọ njikwa okpomọkụ dị oke mkpa n'ihi obere ọdịiche dị na agbaze na brazing okpomọkụ maka aluminom (20-50 C dabere na alloy, igwe na ikuku), nrụpụta ọkụ dị elu nke aluminom na obere anya na ndị ọzọ nkwonkwo nkwonkwo ụkwụ na ọrụ gara aga.
Ugbo oku bụ usoro a na-ahụkarị maka brazing ọkpọkọ dị iche iche iji kpoo isi ihe na-ekpo ọkụ. Ọgụgụ 1 bụ ihe osise nke ihe ume nkwado setịpụrụ maka brazing ọkpọkọ na ọkpọkọ na isi ihe na-ekpo ọkụ ọkụ. N'ihi ihe ndị achọrọ maka kpo oku zuru oke, ihu nke eriri ntinye ahụ kwesịrị ịdị nso na nkwonkwo iji kwado ya. Ya mere enweghi ike iji eriri eriri cylindrical dị mfe, n'ihi na enweghị ike wepu akụkụ ahụ mgbe brazed nkwonkwo.
E nwere ụzọ mkpịsị eriri mmịbanye abụọ eji eme braị nkwonkwo ndị a: ụdị nke ndị na - eme ka “clamshell” na “horseshoe-hairpin”. Ihe nchoputa "Clamshell" yiri ndi na-eme ka ha na cylindrical, ma ha meghere iji wepu ya. Ndị na-arụ ọrụ "Horseshoe-hairpin" inductors na-adị ka ịnyịnya inyinya maka ịkwanye akụkụ ahụ ma bụrụkwa eriri igwe ntutu abụọ n'akụkụ abụọ nke nkwonkwo ahụ.
The uru nke iji a "Clamshell" inductor bụ na kpo oku bụ ọzọ edo na gbaa ma dịtụ mfe ịkọ. Ihe ọghọm nke inductor "Clamshell" bụ na sistemụ igwe chọrọ ihe gbagwojuru anya na ndị kọntaktị dị elu ugbu a enweghị ntụkwasị obi.
Ndị na-emepụta "Horseshoe-hairpin" na-emepụta ihe ọkụ ọkụ 3-D dị mgbagwoju anya karịa "Clamshells". Ihe bara uru nke ihe eji acho acho "Horseshoe-hairpin" bu na eme ka ihe di mfe.
Ngwunye Aluminom Brazing
Ngwunye kọmputa na-eme ka brazing rụọ ọrụ
Nnukwu onye na-emepụta mgbanwo ọkụ na-enwe nsogbu dị mma na brazing nkwonkwo egosiri na 1 nke na-eji ihe eji achọ ịnyịnya-hairpin style inductor. Ihe nkwonkwo nkwado dị mma maka ọtụtụ akụkụ, mana kpo oku ga-adị iche maka ụfọdụ akụkụ, na-eme ka omimi njikọta zuru oke, nkwonkwo oyi na igwe na-ejupụta na-agbago mgbidi ọkpọkọ n'ihi ikpo oke ọkụ mpaghara. Ọbụna na nnwale nke onye na-ere ọkụ ọkụ ọ bụla maka nkwụsị, akụkụ ụfọdụ ka na-agbanye na nkwonkwo a na ọrụ. Center for Induction Technology Inc. ka enyere gi aka inyocha ma dozie nsogbu a.
Onyinye ike eji arụ ọrụ nwere ihe na-agbanwe agbanwe nke 10 ruo 25 kHz na ike akara nke 60 kW. N'ime usoro nkwado, onye ọrụ na-etinye mgbanaka igwe na-agbazi na ngwụcha ọkpọkọ ma tinye ọkpọkọ n'ime ọkpọkọ ahụ. A na-etinye onye na-agbanwe ihe na-ekpo ọkụ n'elu igwe pụrụ iche wee banye n'ime inductor inyinya.
A na-ebute mpaghara brazing niile. Ugboro ole ejiri kpoo akụkụ ahụ bụ 12 ka 15 kHz, na oge kpo oku bụ ihe dịka 20 sekọnd. A na-ahazi ike ike site na nkwụsịlata eriri na njedebe nke okpokoro ọkụ. Pyrometer ngwa anya na-agbanyụ ike mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị n'akụkụ azụ nke nkwonkwo ahụ ruru uru atọrọ.
Enwere ọtụtụ ihe nwere ike ime ka ekwekọghị na onye nrụpụta ahụ nọ na-enwe, dị ka mgbanwe na ngwakọta njikọta (akụkụ na ọnọdụ) yana ejighị n'aka ma gbanwee (n'oge) kọntaktị eletriki na nke na-ekpo ọkụ n'etiti ọkpọkọ, ọkpọkọ, mgbanaka ọkụ, wdg. enweghi ike kwụsie ike, na obere ọdịiche nke ihe ndị a nwere ike ibute usoro dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, mgbanaka ọla na-emeghe emeghe nwere ike ịtọpụtụ n'okpuru ikike electromagnetic, na njedebe nke mgbanaka ahụ nwere ike ịmịkọrọ ya ma ọ bụ nọrọ na-enweghị ntụ. Ihe ndị na-eme mkpọtụ na-esi ike ibelata ma ọ bụ iwepu, ihe ngwọta nke nsogbu a chọrọ ka ịbawanye ike nke usoro ngụkọta. Kọmputa ịme anwansị bụ ngwá ọrụ dị irè iji nyochaa ma bulie usoro ahụ.
N'oge nyocha nke usoro nkwado, a hụrụ ikike ike electrodynamic siri ike. N'oge a na-agbanye ike, eriri ịnyịnya na-ahụ n'ụzọ doro anya mmụba n'ihi ngwa ngwa nke ike electrodynamic. Ya mere, e mere ka onye nrụpụta ihe dị ike karịa ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma, gụnyere itinye mgbakwunye faiba glaasi ọzọ (G10) nke jikọtara mgbọrọgwụ nke ihe mkpuchi ntutu abụọ. Ngosipụta ọzọ nke ikike ndị a na-ahụ anya nke electrodynamic nọ na-agbanwegharị nke ọla nchara a wụrụ awụ si n'akụkụ ndị dị nso na ọla kọpa na-atụgharị ebe mpaghara magnet siri ike. Na a nkịtị usoro, dịanyā metal na-ekesa uniformly gburugburu nkwonkwo ruru ka capillary agha na ike ndọda na iche na ihe ndiiche usoro ebe filler metal nwere ike na-agba ọsọ nke nkwonkwo ma ọ bụ gbagoo tinyere na ọkpọkọ elu.
n'ihi na Ngwunye aluminom bụ usoro gbagwojuru anya, ọ gaghị ekwe omume ịtụ anya nnwale zuru oke nke usoro niile dị iche iche (electromagnetic, thermal, mechanical, hydrodynamic and metallurgical). Usoro kachasị mkpa ma nwee ike ịchịkwa bụ ọgbọ nke isi mmalite nke electromagnetic, nke ejiri usoro Flux 3D nyochaa. N'ihi ọdịdị dị mgbagwoju anya nke usoro brazing ntinye, ejiri ngwakọta nke ịme anwansị kọmputa na nnwale maka nhazi usoro na njikarịcha.
Categories Technologies Tags aluminom brazer, aluminom brazing, aluminom usoro brazing, aluminom na-etinye brazing, aluminom na-eme ka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ, zuta aluminom brazer, zụta aluminom induction brazer, elu ugboro aluminum brazing, Ngwunye Aluminom Brazing, Ngwunye aluminom brazing ngwa, ntinye aluminom bracing, induction aluminum heater Mail igodo